Madaxweynaha oo sagootiyay Guddi la socon doona Dacwada Badda ee Somalia iyo Kenya – Xeernews24
Madaxweynaha oo sagootiyay Guddi la socon doona Dacwada Badda ee Somalia iyo Kenya
18. September 2016 /in WARAR/NEWS /von admin
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay sagootiyay guddi korjoogto ah, kuwaasoo tagi doona Maxkamadda Caalamiga ah ee Cadaaladda (ICJ) ee ku taala magaalada The Hague ee dalka Holland.
Guddigan ayaa u tagi doonaa sidii ay ula socon lahaayeen dacwada Badda ee u dhaxeysa dalalka Kenya iyo Soomaaliya oo la filayo in maalinta barito ah ay dib uga furanto magaalada The Hague.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheakh Maxamuud ayaa muujiyey sida dowladda Soomaaliya ay ugu kalsoontahay in ay ku guuleysato dacwadaasi, maadaama Soomaaliya si sharci ah ay u martay dacwada la xiriirta muranka Badda ee Soomaaliya iyo Kenya.
“Waxaan xalay sagootiyay guddi korjoogto ah oo tagi doona Maxkamada Caalamiga ah ee Cadaalada, guddigaan waxay halkaasi u tagayaaan inay la socdaan dacwada u dhaxaysa dalkeena Soomaaliya iyo dalka Kenya ee ku saabsan murranka badda, waxaan ku kalsoonahay inaan dacwadaasi ku guulaysan doono inshalaah”ayuu yiri Madaxweynaha Soomaaliya.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2016/09/xasan3.jpg 540 960 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2016-09-18 09:02:282016-09-18 09:02:28Madaxweynaha oo sagootiyay Guddi la socon doona Dacwada Badda ee Somalia iyo Kenya
Tanina Kuwii Hora Ka Daran Jen. Goobaale iyo qaar ka mid ah Ilaaladiisa oo lagu dilay weerar ismiidaam...